Sida loo furo daaqad cusub oo Boostada ah oo la adeegsado toobiye fudud oo fudud | Waxaan ka socdaa mac
Waa suurtagal in in ka badan idinka mid ah uu leeyahay akoonno dhowr ah oo emayl ah oo ku jira arjiga Boostada oo tan, oo ku soo noqnoqoneysa dhammaan isticmaaleyaasha, waxay noqon kartaa dhib markii la eegayo emayllada aan ku haysanno mid kasta oo ka mid ah. Runtu waxay tahay in codsiga OS X Mail ee asalka ahi wali uu yahay codsigeyga maaraynta emaylka ilaa maantadan iyo mararka qaar waxaan ubaahanahay inaan furo labo ama seddex daaqado si aan u arko qadarka emayllada soo galaya koonto kasta, sidaa darteed kan ugu fiican (ee kiiskeyga) waa daaqad u fur cinwaan emayl kasta tanina runtii way fududahay in lagu sameeyo toobiye-gahan.
Way fududahay in la sameeyo taas oo ah mid xiiso leh in dhammaan isticmaaleyaashu ay ogyihiin, sidaa darteed kuwa hadda yimid OS X illaa kuwa ku xirnaa codsiga OS X Mail muddo dheer riix alt + cmd + N si aad u furto daaqad kale iyo maaraynta akoonnada emayllada kala duwan isla waqti isku mid ah ayaa noqon kara mid xiiso leh.
Xaaladdayda, waxa aan sameeyo waa in aan dheereeyo daaqadaha si aan ugu arko Mac-ha oo leh baaxadda ugu ballaaran oo cidhiidhi ah oo ku filan saddex daaqadood oo ku habboon shaashadda iyo muraayad keliya oo loogu talagalay Boosta. Kadibna si loo xiro waxaan u isticmaali karnaa cmd + W taasi waa mid mid ayey u dhowdahay, sidoo kale cmd + Q inay ku xirto Boostada. Tani had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa cabirka shaashadda Mac iyo dhadhanka isticmaale kasta, laakiin guud ahaan marka la eego iyo ka dib markii aan isku dayay dhowr habab oo kiiskeyga ah waxa ugu fiican ayaa ah sidan. Waxaan rajeyneynaa in tilmaantan fudud ay ku caawin karto markay tahay maaree xisaabaadka emaylka isku mar Mac.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Tababarada » Sida loo furo dariishad cusub oo ku jirta Mail iyadoo la adeegsanayo toobiye fudud oo fudud